Tombony ny milina sandriny namorona milina - China Longkou Fushi fonosana
A dvantages ny milina sandriny forming milina
Mamorona faritra dia lehibe kokoa. Fahaiza-mamorona faritra dia 1400mm × 1100, dia lehibe kokoa noho ny heny 1.4 milina nentim-paharazana, dia azo namboarina intsony boaty. Mieritreritra fa ny nentim-paharazana modely ny bobongolo dia afaka mandamina 20 boaty, 28 boaty milina modely ny bobongolo azo fandaharana.
Production haingana dia haingana. Heater efajoro hisaraka ho telo toko, hydraulic fanapahana hafainganam-pandeha dia haingana kokoa, ary mampiasa milina fiadiana mba vokatra ny mitaiza kely, mihoatra noho ny fomba rehetra mampihena ny fotoana miasa rehetra.
⑴ Heating boaty halavan'ny tanteraka dia 4.4m, somary hanitatra fanafanana ny fotoana, fanalavirana ny hafanana avo ketraka ny lamba, tamin'izany andro izany fanaovana faharoa mandroatra tsara kokoa vokany.
⑵ hydraulic Varingarin'i dia lehibe kokoa. Nentim-paharazana modely hydraulic varingarina niteraka dia 160mm, raha ny modely milina dia 220mm, fifandraisana faritra hitombo 1 fotoana, ny tsindry eo amin'ny faritra vondrona mihena, ka manolotra ny fiainany. Mandritra izany fotoana izany, ny fiantraikany eo amin'ny faritra sy ny hydraulic solenoid miditra tsimoramora fihenana, manolotra ny ainy koa.
Mechanical ⑶ sandriny niisa vokatra eo amin'ny andaniny sy ny ankilany, izay afa-tsy ny nentim-paharazana ny conveyor modely fehin-kibo Output fotoana, hampitombo ny hafainganam-pandehan'ny famokarana ny rehetra.
Mechanical sandriny modely famokarana hafainganam-pandeha dia afaka tonga 18-22cycles / min, ora tsirairay dia afaka mamokatra sakafo antoandro 33000-37000pcs boaty. Na dia nentim-paharazana ny hafainganam-pandeha no modely famokarana 12-15cycles / min, izany hoe ora tsirairay dia afaka mamokatra 12000-18000pcs, afa-tsy ny antsasaky ny fahombiazana ny milina sandry modely.
Ny sisin'ny fitaovana eo tamin'izy roa lahy, ny nentim-paharazana efajoro modely lasitra tsy maintsy ho ny 2cm, raha amin'ny milina vaovao dia tsy modely sandriny mahery 1cm. Izany indrindra mampihena ny fako ara-nofo, ho vita kokoa ny vokatra.
Vonjeo zavatra hafa, ka mampihena ny vola lany. Ny modely roa mampiasa zavatra hafa ihany, mpiasa mila 3 / fiovàna, ka mampiasa milina vaovao sandriny modely afaka mampihena anatin'ny masonkarena, ka tombony bebe kokoa.
Ny mitaiza kely, ary hanaisotra ny sakafo ny kaontenera. Na ny kaontenera tsy ninonoanao nivoaka soa aman-tsara, izany dia tsy misy fiantraikany hetsika manaraka.
Nanapaka faritra dia afaka mihetsika: entin'ny maotera, dia mahasoa ho an'ny fanovàna ny lasitra sy ny afaka mamonjy ny fotoana miova lasitra.
Electrostatic eliminators aroso tsy hanapa faritra, sy ny fitehirizana faritra, dia afaka manafoana ny voasakantsakan'ny forming novokarina nandritra ny dingana. Enga anie azo antoka ny fiarovana ny producting.
Ny mpitari-dalana lalamby dia vita amin'ny Stainless vy, mateza kokoa noho ny mpitari-dalana aluminium lalamby